Silhouette amin'ny baoritra Sunset Selfies | Famoronana an-tserasera
Asa famoronana miaraka amin'ny baoritra ho an'ny aloky ny Sunset Selfies
Sunset Selfies dia mitondra antsika amin'ny asa kanto misy talenta izay ahitantsika silhouette baoritra izay samy misarika ny biby sy ny olona malaza hamorona seho mamorona be dia be.
Asan'ny mpamorona iray izay tamin'ny alàlan'ny Naseho ny marika Sunset Selfies. Ary araka ny filazany ihany, isan'andro dia mila mandao ny asany miaraka amin'ny solosaina findainy izy mba hamoronana zavatra amin'ny tànany. Ary ny marina dia tena mendrika izany araka ny sary vitsivitsy zarainay etsy ambany.
Ny fizotrany amin'ny famoronana dia tsy misy soratana an-trano. Rehefa nilaza izy, makà baoritra lehibe, manintona sary, manapaka antsy sy hety, ary mitondra azy hiaraka aminy haka sary selfie amin'ny filentehany.
Ny fampiasana ny aloka sy ny maizina miaraka amin'ny silhouette izay manintona ny baoritra izay misy ny Sunset Selfies aingam-panahy hamorona fotoana manaitra izay manome aingam-panahy antsika miaraka amin'izay.
Ahoana no fandraisanao ny mitovy ET ny Extraterrestrial ka ny ankihiben'ilay izy dia afaka mamorona teboka hazavana ary amin'izany dia mamela ny tany ambadiky ny filentehan'ny masoandro izay mamoaka effets optika izay manome realisme be dia be ny sehatra.
ihany koa manana ilay goavambe vy izahay izay ianteherany eo an-tongony hamoronana sehatra hafa misy effets optique izay tsy mamela olona tsy hiraharaha.
Na toy ny antsantsa ao aminao silhouette dia toa mahazo sakafo avy amin'ilay mpanakanto Sunset Selfies iray ihany ho an'ny fandraisana hafa mahaliana sy mamorona. Azonao atao ny manaraka ny asan'izy ireo avy amin'ny pejinao Instagram ary araho miaraka amin'ireo maro izay talanjona amin'ny zavakantony sy ny fomba ampiasany ny masoandro hamoronana ireo sary ireo.
Aza adino ireo Silhouette 37 ampiasain'ny olona amin'ny sanganasa noforoninao manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Asa famoronana miaraka amin'ny baoritra ho an'ny aloky ny Sunset Selfies
Ny sary famantarana hafahafa an'ny Expo 2025 ao Osaka any Japon
Sarontava hafahafa sy sahisahy Burger King